‘ज्ञानेन्द्र शाहीमाथिको आक्रमण गलत छ’
बसन्त थापा मगर, मेरिल्याण्ड अमेरिका
ज्ञानेन्द्र शाहीले नेतृत्वमा हुनुपर्ने व्यवहारिक सिमा तोडेको कारण यस्तो प्रतिआक्रमण भएको हुन सक्छ । तर यो आक्रमण हर तबरले गलत छ । ज्ञानेन्द्र आफै नेता र भाषण गरेर बिना प्रमाण यो र उ भनेर नाम तोकेर भष्ट्राचारी र आमाचकारी गाली बेइज्जत गर्दै हिड्नु एउटा अभियन्ताका लागि सुहाउने कुरो हुँदै होइन । अभियन्ता बनेर हिड्ने तर आफै नेतृत्व लिएर यात्रुलाइ बहकाउमा पुराउने । वकिल जस्ता जिम्मेवार मानिस स्थिति सम्हाल्न छोडेर नराम्रो स्थिति बनोस् भनेर चुप लागेर बस्नु । शाहीले जहाजमा हुल हुज्जत गर्नु, अभद्र व्यवहार गर्नु, हवाइ यात्राको नियम उल्लंघन गर्नु र अन्य अराजक भाषणहरू गर्नु, गाली गर्नु, आक्रोशित स्थिति बनाउनुको उपज पनि हो कि यो आक्रमण भनेर आशंका गर्न सकिन्छ । तर, पनि हर तबरले यो आक्रमण गलत छ । अर्को कुरा उनको आत्मघाती बिरोध शैली पनि यस खाले घटना निम्त्याउन जिम्मेवार छ भन्ने लाग्दछ ।
राम्रो घर र शहरमा बस्दैमा कोही भष्ट्रचारी हुने भए सबै भन्दा बढी भष्ट्रचारी राजाहरू हुन् । युगौ युगसम्म नाँगै खुट्टा जनता हिड्ने । माटो र पराले साना घर र छाप्रोमा आम जनता बस्न पर्ने अवस्था बनाउने, फाटेका जुत्ता र कपडा लगाएर जीवन गुर्जाने स्थिति बनाउने राजतन्त्र र राजाहरू ठुला महल र दरबारमा बस्ने भष्ट्राचारी हो कि होइनन ? देशका ठूला–ठूला व्यापार आफै गर्ने र हात पार्ने राजा भष्ट्राचारी हो कि होइनन् ? राष्ट्रको हजारौ रोपनी जमिन आफ्नो बनाउने राजा भष्ट्राचारी हो कि होइनन् ? खरबौ रूपैया आफ्नो बनाउने राजाहरू भष्ट्राचारी हुन कि होइनन् ? राजाका तलब र भत्ताले मात्रै दरबारहरू बन्न सक्छन र ? हजारौ जमिन आफ्नो बनाउन सकिन्छन र ? खरबौ रकम जम्मा गर्न सकिन्छन त ? सकिदैन ।
के राजाहरू मात्र दरबारमा बस्ने ? जनताहरू छाप्रो र सामान्य घरमै बस्नुपर्ने अवस्था रहिरहनु पर्ने ? भाग्यलाइ दोष दिएर राज्यलाइ राजाको भोग बिलासमा मात्रै लगाउनुको कारण देश र जनता गरिब बनेका होइनन् र ? जमिनमा काम केहि नगर्ने निधारमा कर्म नै यस्तो लेखिए भनेर भाग्य र कर्मलाइ दोष दिएर राजाहरू र भारदारहरू मात्र समपन्न बन्न पाइन्छ ? राज्यका मुख्य अंग सेना, प्रहरी, अदालत, सामाजिक संगठन तिर राणा, शाह, बस्न्यात, थापाहरू मात्रै राजा र पंचहरूको शासनमा मुख्य पदमा रहने त्यो दिनहरू सबैले बिर्सिसकेका छन र ? यस्ता राज्य दोहनका कुरा जति गरिए पनि कम हुन्छ ।
अर्को कुरा हामीले भनेजस्तो र विरोध गरेजस्तो के शहर र सदरमुकामतिर बनेका र देखिने ती सबै ठुला र राम्रा घर नेताहरूका मात्रै हुन त ? ठूला र राम्रा यी सबै शहर र वस्तिका मानिस सबै भष्ट्रचारी हुन त ? ठुला घर र कार नै भष्ट्राचारका प्रमाण हुन त ? राज्यका प्रमुख पदका, ठूला नेता सबै देशमा राम्रा र ठूला घर मै बस्छन् त ? कारमा हिड्छन त ? यस्तो जुनसुकै शासन व्यवस्था र अवस्था भएको देशमा हुन्छन् । उनीहरूको पद र जिम्मेवारी बहन गर्न पनि ठूला घर र कार आवस्यक पर्छन् । सुरक्षा र सुरक्षाकर्मी त झन अनिवार्य आवस्यकता हुन् । यसमा विवाद र विरोध होला तर यो आवस्यक हुन्छ । ठूला घर र कारका कुरामा यसको पनि जायज सिमा र आयश्रोत भने हुनैपर्दछ । यसमा रहने र उपभोग गर्नेहरूले सोच्नैपर्छ । देश र जनताका मानसिकता र आर्थिक अवस्था अनुसार हुनैपर्छ र आफूलाई पनि त्यसतिर ढाल्ने कोशिष नेताहरुले गर्नैपर्दछ ।
जे हुदैछ नराम्रो हुदैछ आफ्नै अभद्र र अराजक बिरोध शैलीको कारण आक्रमण हुन थालेका हुन् भन्दा फरक नपर्ला । तर, आक्रमण गर्दै हिन्ने शैली र संस्कार पनि गलत हो । यस्ता आक्रमण गलत हुन्, सभ्य मानिसले आक्रमण्मा उत्रदैन, विचार र छलफलले सहिलाई सहि र गलतलाई गलत भन्नेतिर लाग्छ । क्रान्तिकारी, राजावादी, प्रजातन्त्रवादी जो सुकैबाट किन नहोस्, यस्ता आक्रमण गलत हुन् । यो रोकिनु पर्छ र साथै बिना प्रमाण जथाभावी आफ्नो पक्ष र प्रतिपक्षहरूलाइ आक्रमक गर्ने, आक्रोशित बनाउने भाषण र आचरण सबै नेता, जनता र अभियन्ताहरूले छोड्नै पर्दछ ।
नेपालमा राजादेखि नेता र जनताबाट सिमा र नैतिक आचरण तोडिए कै छन् । यो अलग पाटो हो, तर राजा र जनतामात्र ठिक, नेताहरू बेठिक भन्ने ज्ञानेन्द्र शाहीहरूका चस्मा दोषी नै हुन् । चाकडीबाज र मन परेकालाइ राज्यको पद, सम्पत्ति र जमिन बक्सिस दिनु भष्ट्राचार हो कि होइन ? राजाका यी भष्ट्रचार, पक्षपात, अनियमितताको बारेमा बालकृष्ण न्यौपाने, सुरेन्द्र भण्डारी र ज्ञानेन्द्र शाहीले कहिले बिरोध गरे ? देशका शिक्षा क्षेत्रमा, अस्पताल क्षेत्रमा, मेडिकललगायतका क्षेत्रमा भएको व्याप्त बेतिथिका बारेमा उनीहरु बोल्न पर्दैन ? के नेताहरुलाई गाली गर्नुमात्र उनीहरुको अभियान हो त ? यदि त्यसो हो भने यो जनताका लागि नभएर नेताहरुसँग आफ्नो रिसइबी साँध्नका लागि उनीहरुले बोलेका हुन् र अभियान सञ्चालन गरेका हुन् भनेर बुझ्न अब कसैले पनि ढिलो गर्नु हुँदैन ।
अहिले देश र जनतालाई लामो समयदेखि थिचोमिचोमा राखेर आफू र आफ्ना सन्तानका लागि मात्र सोच्ने राणा र राजा शासन फालेर देशमा लोकतन्त्रको बहाली गर्न मुख्य भूमिका खेलेकाहरुलाई नै शाहीहरु लगायतका अभियन्ताले बिना प्रमाण जथाभावी गाली गर्दै उनका समर्थक, कार्यकर्ताहरूलाइ आक्रोशित बनाउदै जहाज चढ्दै, गाडी भाडामा लिदै भष्ट्राचारको बिरोधमा अराजक भाषा र शैलीमा भाषण गर्दै हिड्नुको कारण हुन सक्छ शाहीमाथिको आक्रमण । हिजो राजाको बिरोध गर्नेलाइ व्यपत्ता पारिन्थे, मारिन्थे, सम्पति जफत गरेर निर्वासन पठाइन्थे । आज बोल्न पायो भन्दैमा मानिसहरूलाइ आक्रोशित बनाउने, आक्रमक बनाउने शैली र व्यवहारमा कोही नेता तथा अभियन्ताहरू लाग्नु हुदैन् । बालकृष्ण, सुरेन्द्र, गगन, प्रचण्ड, ओली कोही पनि आत्मघाती बिरोध शैलीमा उत्रनै हुदैन् । झन ज्ञानेन्द्र शाहीहरू शाहहरूको मात्र राज र शाहहरू मात्र शासन गर्न योग्य छन् र हुन भन्ने भित्री उदेश्य बनाएर भष्ट्रचारको बिरोधको नाममा लाखौ खर्च गरेर जहाज चढेर अपारदर्शी रूपमा हिड्नु हुदैन भन्ने लाग्छ ।
चर्को बोले चर्कै प्रतिक्रिया आउछ । समर्थकलाइ आक्रोशित र आन्दोलित बनाउन खोज्दा बिरोधीहरू पनि आक्रोशित र आन्दोलित हुन सक्छन् । यसमा सबै पक्षले ध्यान दिन र नियन्त्रित हुन जरूरी छ । होइन भने एक अर्को पक्ष माथी आक्रमण, प्रति आक्रमण बढ्दै र घट्दै जान्छन् । आक्रमण सबैमाथी हुन सक्छन् । राज्य र नागरिक, नेता र अभियन्ता जिम्मेवार, अनुशासित, सहनशिल र लगनशील बनौ । आक्रोशित र आक्रमक नबनौ । यस्ता घटनाले देशमै अप्रिय घटना ननिम्त्याउला भन्न सकिन्न !
५० हजार डलरमा किन्न सकिन्छ अमेरिकामा ग्यास स्टेशन
तपाईले नया स्थानमा बस्दै जादा वा सम्भावित स्थान वा राज्यहरुमा…
नेपाली जनताले एमसीसी खारेज गर्न सक्छन् !
सारा विश्वले सुन्ने र सबै नेपालीले बुझ्ने गरी अमेरिका र…
आदरार्थी भाषाको प्रयोगलाई नबिगार्ने तर्फ ध्यान पुर्याउने हो कि ?